बैंकिंग Archives - Page2of 271 - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
एनबीए र पोखरा विश्वविद्यालयबीच वित्तीय साक्षरताका लागि सहकार्य
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०५:०७ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) र पोखरा विश्वविद्यालय स्कूल अफ बिजनेशबीच वित्तीय साक्षरता अगाडि बढाउँन सहकार्य भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा एनबीएका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना र पोखरा विश्वविद्यालयका निर्देशक डा. रविन्द्र धिमिरेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताले दुवै संस्थाबीच वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु ग्रामिण भेगमा अगाडि बढाउन सहयोग मिल्नुका साथै आगामी दिनहरुमा […]
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ००:५३ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ९ जेठ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडले पर्सा जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टरको शुभारम्भ गरेको छ । बैंकले प्रदेश नम्बर २, वीरगंज महानगरपालिका वडा न. ३ स्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर शुभारम्भ गरेको हो । शाखा कार्यालय वीरगंजका निमित्त प्रमुख विश्वप्रकाश ज्ञवालीले उक्त एक्सटेन्सन काउन्टरको उद्घाटन गरेका हुन् । शाखा कार्यालय वीरगंज मार्फत रहने […]
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ००:३४ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ९ जेठ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र यूनिभर्सल इन्स्टिच्यूट अफ एड्भान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रा.लि.बीच उपचारमा छुट सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका भैरहवा शाखाका शाखा प्रबन्धक तुल्सी प्रसाद आचार्य र यूनिभर्सल इन्स्टिच्यूटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय कुमार पिएसले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार बैंकका प्रिपेड÷डेबिट कार्डका ग्राहकहरुले यूनिभर्सल […]
सन्राइज बैंकको गठ्ठाघरको चारदोबाटोमा शाखा
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ००:०८ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ९ जेठ । सन्राइज बैंक लिमिटेडले भक्तपुर स्थित गठ्ठाघरको चारदोबाटोमा शाखा विस्तार गरेको छ । बुधबार आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, बैकका संचालक दिपक नेपाल र बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशा राणा अधिकारीले संयुक्त रुपमा शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । यो हालसम्म बैंकका शाखा […]
७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २३:०४ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ८ जेठ । नेपाल एसबीआई बैंक र खल्ती डिजिटल वालेट बीच डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल एसबीआई बैंकका तर्फबाट बैंकका डेपुटी सीईओ तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत शुभकान्त कनुंगो र खल्तीका तर्फबाट म्यानेजिङ डाइरेक्टर मनिष मोदीले राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन । सम्झौता […]